विगतमा केसीको ज्यान जोगाउन मात्रै सम्झौता गरेको देखियो : समिति - समाचार - कान्तिपुर समाचार
विगतमा केसीको ज्यान जोगाउन मात्रै सम्झौता गरेको देखियो : समिति
काठमाडौं — तीन सातादेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरु केवल अनसन तुहाउने र उनको ज्यान जोगाउने तत्कालिन उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित रहेको भेटिएको छ । केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको सुझाव दिन र अनुगमन गर्न गठित समितिका पदाधिकारीहरुले सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाइएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘सम्झौता गरेपछि केसीलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाउने अनि त्यो सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भइरहेको छ’ समितिका संयोजक प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भने, ‘अनसन तोडेपछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो दिएको देखिएन ।’ केसीसँगकै सम्झौताका क्रममा तत्कालिन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा अधिवक्ता ज्योती बानियाँ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक सहायक डिन सदस्य थिए ।
केसीले अघि सारेको आईओएमको स्वायत्तताको मागमा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बेइमानी गरेको टिप्पणी संयोजक श्रेष्ठको थियो । उनले आफूले पहल गर्दासमेत उपकुलपति बाहेक अरुले त्यस विषयमा चासो नदिएको आरोप लगाए । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका केही अधिकारहरु खोसेको छ ।
समितिका सदस्य तथा अधिवक्ता ज्योती बानियाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘जीवनरक्षाका लागि मात्रै सम्झौता गरेको देखियो । सरकारले प्राविधिक काम गरेको छ । तर, गर्नुपर्ने अरु निर्णय र उपलब्धीमूलक काम भएन ।’ डा. केसीसँगको आठ वटा सम्झौताका अधिकांश विषयवस्तु कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ १४:२२
गृहमन्त्री शर्मा पश्चिमका बाढीग्रस्त क्षेत्रमा
काठमाडौं — गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पश्चिम नेपाल पुगेका छन् । यती एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी गृहमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा १९ जनाको टोली आइतबार बिहान ९:१५ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । गृहमन्त्री शर्माले बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुरमा गएर बाढी प्रभावित जनता तथा पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरे । उनले उद्धारका लागि मातहतका निकायलाई थप निर्देशन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पश्चिम नेपाल पुगेका छन् ।
यती एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी गृहमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा १९ जनाको टोली आइतबार बिहान ९:१५ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । गृहमन्त्री शर्माले बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुरमा गएर बाढी प्रभावित जनता तथा पीडितहरुलाई प्रत्यक्ष भेटघाट गरे । उनले उद्धारका लागि मातहतका निकायलाई थप निर्देशन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसै गरी उनले राप्ती किनारका बस्तीहरु, बर्दियाको बबई किनारका बस्ती र गुलोरिया नगरपालिकाका प्रभावित क्षेत्रहरुको हवाई निरीक्षण गरेका छन् ।
टोलीमा पशुपन्छी विकास मन्त्री सन्तकुमार थारु, आईजीपी प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बलदेवराज महत, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीप रेग्मी, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति सदस्य सचिव कृष्ण राउतलगायत छन् । गृहमन्त्री शर्माको टोलीले मौसम अनुकूल भएमा पुर्वका बाढी प्रभावित क्षेत्रको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ ।